हिमाल दोलखाको आईपीओ बिहीवार बाँडफाँट हुँदै
भदौ ४, काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले बिहीवार आईपीओ बाँडफाँट गर्ने भएको छ । विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालय, जमलमा दिउसो ४ बजे आईपीओ बाँडफाँटको कार्यक्रम तय भएको हो । कम्पनीले असार २५ गतेदेखि साउन २४ गतेसम्म सर्वसाधारणहरुको लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । कम...
एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फण्डको इकाई खरीद गर्ने बिहीवार अन्तिम दिन
भदौ ४, काठमाडौं । साउन ८ गतेदेखि विक्रीमा आएको एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फन्डको इकाई खरीद गर्ने बिहीवार अन्तिम दिन रहेको छ । यस योजनाले १२ करोड ५० लाख इकाई छिटोमा १२ गते र ढिलोमा भदौ ५ गतेसम्मका लागि विक्रीमा ल्याएको हो । छिटो अवधिसम्म विक्री हुन नसकेपछि फण्डले ढिलो अवधिसम्म इकाई विक्री खुला गरेको हो ।...
०.४२ अंक बढ्यो नेप्से, विशाल बजारको शेयरमूल्यमा सर्वाधिक वृद्धि, ३० कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर
भदौ ४, काठमाडौं । बुधवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ४२ अंक बढेर १ हजार २१४ दशमलव शून्य ५ विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन १ हजार २१३ दशमलव ९७ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको शुरुको अवधिमा सामान्य घटबढ भएर दोस्रो घण्टाको अवधिमा घटेर १ हजार २०९ दशमलव ८५ विन्दुमा पुगेको थियो । सो विन्दुपश्चात उकालो लाग...
नेप्सेले स्थगित गर्‍यो वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्सको प्रकृया
भदौ ४, काठमाडौं (अस) । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाईसेन्स दिने प्रकृया स्थगित गरेको छ । नेप्सेले संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिबाट साउन ३० गते प्राप्त पत्रको आधारमा हाललाई ब्रोकर लाईसेन्सको प्रकृया स्थगित गरेको हो...
नेप्सेमा सबैको लघुवित्तको शेयर सूचिकृत
भदौ ४, काठमाडौं (अस) । नेप्सेमा सबैको लघुवित्त वित्तिय संस्थाको शेयर सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको १६ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सूचिकृत भएको सूचना नेप्सेमा दिइएको छ ।
२.३५ अंकले घट्यो परिसूचक, २० करोडको शेयर कारोबार (२ बजेको अपडेट)
भदौ ४, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा २ दशमलव ३५ अंक घटेर १ हजार २११ दशमलव २८ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २१३ दशमलव ९७ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक तेस्रो घण्टामा शून्य दशमलव १९ प्रतिशत घटेको हो । बुधवार तेस्रो घण्टासम्म कारोबारमा आएका १५३ कम्पनीको रू. २० करोड...
शिखर इन्स्योरेन्सको बीमा शूल्क आर्जन ३ अर्ब, जगेडा कोषमा ४५ करोड
भदौ ४, काठमाडौं (अस) । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आव २०७५÷०७६ को अन्तिम त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले गत आवमा रू. ३ अर्ब ५१ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. ३ अर्ब ३३ करोड आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. ४५ करोड ७...
२.३१ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक (१ बजेको अपडेट)
भदौ ४, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से कारोबार भएको दोस्रो घण्टामा २ दशमलव ३१ अंक घटेर १ हजार २११ दशमलव ३२ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार २१३ दशमलव ९७ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो घण्टामा थोरै अंकले बढेपनि दोस्रो घण्टामा शून्य दशमलव १९ प्रतिशत घटेको हो । बुधवार दोस्रो घण्टासम्...
छिमेक लघुवित्तको कम्पनी सचिवको राजीनामा स्वीकृत
भदौ ४, काठमाडौं (अस) । छिमेक लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडको कम्पनी सचिव शोभा मिश्रले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । कम्पनीको भदौ ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भदौ ८ गतेबाट लागू हुने गरी उक्त राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । साथै, कम्पनीले उक्त रिक्त रहेको पदमा संस्थाका प्रबन्धक दिलिप कुमार...